Isithombe: nosipho mkhize UMnuz Phumlile Msizazawe onothando lokutshala izimbali onxusa ukuxhaswa ngendawo yokutshala.
Lo mlisa uthe uthando lwakhe lokutshala izimbali lwaqala ngo-2006. “Ngesikhathi ngiqala ukutshala izimbali ngangisebenza e-Westville engadini, ngase ngabona ukuthi nginethalente ekutshaleni izimbali ngaqala ingadi ekhaya enezimbali engizidayisela umphakathi.”
“Isifiso sami ukuthi kube khona umSamariya olungileyo onganikela ngendawo lapho ngizokwazi ukuqhuba lomsebenzi futhi ngidayisele khona ngipihinde ngifundise nentsha ukutshala izimbali,” kusho yena.
Uthe ingqinamba abhekene nawo wukuthi kunzima ukuthutha izimbali aziyise edolobheni lase-Pinetown ngoba kumele eqe umfula uma ezithutha.
Uthe “Indawo engihlala kuyo ayiyinhle neze ngenxa yokuthi ngaso sonke isikhathi kumele ngeqe umfula uma sengithutha izimbali. Njemanje ngidayisela eceleni komgwaqo ose-Pinetown futhi esikhathini esiningi kuba nzima uma izulu linetha ngoba anginayo umpheme wokukhosela ngakho ngivele ngihlale ekhaya ngingadayisi kuze kudlule isomo esibi sezulu. Yingakho ngibhalele abe-Fever ukuze ngicele usizo lokunikelelwa ngedawo.”
Uma kukhona othanda ukwazi kabanzi ngezimbali noma othanda ukuxhasa uMnuz Phumlile Msizazawe engashayela inombolo ethi: 073 154 8710.